उत्कृट विद्यार्थीको डक्टर/इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य | Nagarik News - Nepal Republic Media
उत्कृट विद्यार्थीको डक्टर/इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य
१४ असार २०७६ ९ मिनेट पाठ
काठमाडौं - यस वर्षको एसइइ परीक्षामा सबै भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने जिल्ला काठमाडौं बनेको छ। यो जिल्लाबाट ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको सख्या ५० पुगेको छ। काठमाडौं शिक्षा विकास तथा समन्यव ईकाइका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले उपलब्ध गराएको तथ्याँक अनुसार यस जिल्लाबाट कुल ३९ स्कुलका ५० विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याउन सफल भएका छन्। जसमध्ये दुइ सरकारी र ३७ निजी विद्यालय रहेका छन्।
सरकारीमा वाफलमा रहेको ज्ञानोदय माध्यामिक विद्यालय र त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थी छन्। भने निजी तर्फका ज्ञानमन्दिर मावि बालाजु, बुढानिलकण्ठ मवि बुढानिलकण्ठ, सिद्धार्थबनस्थली मावि बालाजु, एलआइस्कुल कलंकी, अरुणिमा मावि बौद्ध, ब्राइट फ्यूचर मावि तीनथाना, द न्यू समिट इंगिल स्कुल मैतिदेबी, प्यारागन पब्लिक मावि तिलगंगा, गोठाटार ईङ्लिस स्कुल गोठाटार रहेका स्कुलका विद्यार्थीहरुले ४ जिपिए ल्याउन सफल भएका छन्।
यिसैगरी शशुनिकुञ्ज सेकेण्डरी स्कुल तिरापाइला, त्रिज्योति मावि कपन, गोरखकाली इङ्लिस स्कुल साँखु, सनशाइन मावि महादेवस्थान, महाकवी देवकोटा मेमोरियल स्कुल मुलपानी, मोडेल स्कुल थानकोट, प्रीतिमा इङ्लिस स्कुल सिनामंगल, नोबेल एकेडमी बानेश्वर, काञ्जिरोवा नेशनल स्कुल कोटेश्वर, एडभान्स इङ्लिस स्कुल कालोपुलका विद्यार्थीले पनि जिपिए ४ ल्याएका छन्।
साथै राराहिल मावि कीर्तिपुर, नेशनल मोडल साइन्स स्कुल गाँगबु, रोज वर्ड स्कुल बुद्धनगर, ग्रीनवीच एकेडेमी पेप्सीकोला, म्यालीभ्यू इङ्लिस स्कुल मध्यबानेश्वर, चिल्ड्रेन लिवर्टी इङ्लिस स्कुल जोरपाटी, एन्जलहर्ट सकेन्ड्री स्कुल मनमैजु, क्रियटिभ एकेडेमी कीर्तिपुर, रोउल्टी एकेडमी मण्डिखाटार, ग्लोबल पब्लिक स्कुल मनोहरा बस्तीका विद्यार्थीले पनि ४ जिपिए ल्याएका छन्। उत्तरबाहिनी बोर्डिङ स्कुल गोकर्णेश्वर, नेपाल एपीएफ स्कुल कीर्तिपुर, काष्ठमण्डप विद्यालय मण्डिखाटार, पिकप्वाइन्ट एकेडेमी चुनीखेल कपन र रिलायन्स पब्लिक स्कुल कपनमा रहेका विद्यार्थीले समेत जिपिए ४ ल्याउन सफल भएको पौडेलले बताए।
उनका अनुसार काठमाडौंमा कुल ९ सय ९७ स्कुलका ३७ हजार ५ सय ४८ विद्यार्थीहरु एसइइका परिक्षामा सहभागिता जनाएका थिए। एकसय ६२ सरकारी र ८ सय ३५ निजी विद्यालयको सहभागिता रहेको थियो। जसमध्ये ए र एप्लस ल्याउने कुल विद्यार्थी सख्या ४८.६४ प्रतिशत रहेको छ। ‘काठमाडौ. उपत्यका शहरी क्षेत्र भएकोले यहाँका अभिभावकहरु नानीहरुको भविष्यप्रीत निकै जागरुक छन्,’प्रमुख पौडेलले भने‘साथै सरकारी र निजी दुबेका ब्यवस्थापन पक्ष राम्रो भएकोेले पनि नतिजा राम्रो भएको हो।’
के भन्छन् जिपिए चार ल्याएका विद्यार्थीहरु ?
डक्टर बन्ने लक्ष्य
म समान्य परिवारको छोरो हुँ। विश्वनिकेतक सरकारी स्कुल हो। तर मलाई गर्व छ मेरा गुरुहरुले मलाई स्कुलमै पढ्ने राम्रो वातावरण तयार पारिदिनु भयो। म काठमाडौंमा मामा र दिदिसँग बसेर पढ्छु। वाहाहरुले समेत मलाई घरमा निरन्तर अध्ययन गर्ने सकरात्मक वातावरण तयार पारिदिनु भएको छ। यसकासाथै मेरो निरन्तर अध्ययन गर्ने , थोरै थोरै तर बुझ्ने गरी विषयबस्तुको गहन अध्ययनका कारण मैले ४ जिपिए ल्याउन सफल भएको हुँ। मेरो अबको लक्ष्य डक्टर बन्ने छ। डक्टर बनेर देशमै बसेर निःशुल्क सेवा दिने छु।
सिभिल इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य
विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा मैले ज्ञानोदय स्कुलमा अध्ययन गर्न पाएकोमा गर्व महसुस गरिरहेको छु। बाफलमा रहेको हाम्रो ज्ञनोदय सरकारी स्कुल हो। र हाम्रा शिक्षकहरुको मिहिनेत र कक्षामै बुझाएर पढाउने वातावरणको कारण मैले एसइइ परीक्षामा जिपिए ४ ल्याउन सफल भएको हु। म कक्षा ९ देखिनै प्राविधिक धारमा अध्ययन गरेको हुँ। कक्षा ११मा साइन्स अध्ययन गर्ने लक्ष्य छ। भविष्यमा सिभिल इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य लिएको छु।
डक्टर बनी नेपालमै सेवा गर्ने
जिपिए ४ नोबेल एकेडमी
स्कुलका शिक्षक र घरमा पढ्ने वातावरण भएको कारण मेरो राम्रो अंक आएको हो। आमाबुवाले मलाई सधैं पढ्ने वातावरण तयार पारि दिनु हुन्थ्यो र म दिनरात मिहिनेत गरेर बुझेर अध्ययन गरेके कारण जिपिए ४ ल्याउन सफल भएको हुँ। मेरो भविष्यमा न्यूरोरोलिष्ट बन्ने सपना छ। म नेपालमै बसेर सेवा गर्ने लक्ष्य लिएको छु।
कम्प्युटर इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य छ
म नोबेल एकडेमीमा अध्ययन गरेको हुँ। एसइइमा मेरो ४ जिपिए आएको छ। कम्प्युटर इन्जिनियर बनेर आइटीमा देशको विकासकोलागि काम गर्ने लक्ष्य लिएको छु। बुवा समान्य ब्यापारी र आमा गृहिणी भएपनि मलाई घरमा पढ्ने वातावरण राम्री मिलाइ दिनु भएको छ। त्यसकारण म ढुक्कसँग पढ्न सकेको छु। रटेर भन्दा पनि बुझेर पढेको कारण मलाइ विषयबस्तुहरु छिटो समझिन सजिलो भएको हो। म परीक्षामा भन्दा पनि नियमित अध्ययन गर्ने बानीले अध्ययनसिल भएको हुँ।
मैले ४ जिपिए ल्याउनमा मेरो आफनो मिहिनेतको परीणाम हो। यसकासथै स्कुलका गुरुहरु र अभिभावकको सहयोगले म अध्ययनमा राम्रो हुदै गएको हो। अबको लक्ष्य मेरो मेडिकल शिक्षा हासिल गर्ने हो। डक्टर बनेर गरिब र असहायहरुको निःशुल्क सेवा गर्ने लक्ष्य लिएको छु। मेरो बुवा र ममी दुबै साना ब्यापार गर्नु हुन्छ।
आइटी पढ्ने लक्ष्य
मेरो बुवा निजामति सेवाबाट निवृत कर्मचारी र आमा गृहिणी हुनु हुन्छ। बुवा निजमाति सेवा भएकोले सानैदेखि मैले घरबाटै अध्ययनको राम्रो वातावरण पाएकी हुँ। मेरो सानैदेखि विज्ञान अध्ययन गर्ने इच्छा थियो र मलाई आइटि विषय मन पर्छ । मैले आफनो निरन्तर मिहिनेत र नोवेल एकेडकीको शिक्षकहरुको सहयोगले ४ जिपिए ल्याउन सफल भएको हुँ। एस्ट्रा कक्षाले पनि अध्ययन राम्रो हुन्छ। म आइटि तर्फ लाग्े लक्ष्य लिएको छु।
प्रकाशित: १४ असार २०७६ ०७:०१ शनिबार
जिपिए एसइइ नतिजा